Niteraka Onjam-baovao Tsy Marim-pototra Maro Ny Fitsoahan’Ilay Lehilahy Makedoniana Nanana Ny Maha Izy Azy Nankany Hongria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2018 5:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, македонски, Italiano, English
Nanjary nalaza be ity sary nafangaro ity, avy amin'i Alekandar Dojranliev, Makedoniana mpanao sariitatra, mampiseho ilay praiminisitra teo aloha, Nikola Gruevski, izay manohitra ny fifindramonina, nampanaovina akanjo toy ny mpitsoaponenana tao amin'ny sisintanin'i Hongria. Nahazoana alalana ny famoahana azy.
Amin'ny famoahana vaovao tsy marim-pototra, tsy voamarina sy mamitaka momba ny sidina noraisin'ilay praiministra teo aloha Nikola Gruevski ho any Hongria mba hialàna amin'ny sazy an-tranomaizina roa taona, maro ireo fampahalalam-baovao Balkàna no nandray anjara tamin'ny famoronana fikorontanana sy tsy fahatokisana teo amin'ny vahoaka. Ny famerimberenan'ireo filazambaovao Makedoniàna, Hongroà, Serba ary Albaney ireo karazana lahatsoratra tsy nisy fanamarinana mendrika ny asa fanaovan-gazety fototra no tena loharanon'ilay korontana.
Araka ny voalazan'ny Balkan Insight, fantatra ankehitriny fa nandao an'i Makedonia ho any Albania i Gruevski, ary avy eo nentin'ireo mpiasan'ny masoivoho Hondroà tany amin'ireny firenena ireny nandray fiara diplomatika namakivaky an'i Montenegro sy Serbia ho an'i Hongria.
Nandeha taminà fiaramanidina tsy misy akory izy izany?
Ny iray amin'ireo vaovao tsy voamarina tena goavana indrindra dia avy amin'ilay gazety serba malaza, Politika, izay namoaka lahatsoratra tamin'ny 15 Novambra, nanambara fa “nitsoaka” taminà sidina Malev Hungarian Airlines avy any Tirana, renivohitr'i Albania, ho an'i Budapest i Gruevski. Noho ny governemanta Serba manana fifandraisana akaiky amin'ireo popilista Makedoniana sy Hongroà tafiditra ao anatin'ilay tetika dia ninian'ny Politika mihitsy ny tsy nilaza an'i Serbia tamin'ny làlana nalehan'ilay mpandositra.
Raha maro ny haino aman-jery Balkana no namerina namoaka ilay tantara mitovy tsy misy valaka amin'izay voalaza, ny sasany kosa nanao dingana miavaka tamin'ny fanombanana sy fanampiana lainga ao anatin'ilay vaovao. Ny filazambaovao Meta News agency ao Makedonia, ohatra, nanipika fa efa nitsahatra tamin'ny asany ny taona 2012 ny Malev Hungarian Airlines.
Fanehoana ny zava-misy voamarina mikasika ny lahatsoratra navoakan'ny Politika “Lohatenim-baovao: nandositra any Albania i Gruevski ” nataon'i Raskrikavanje.rs, nahazoana alalana ny fampiasàna azy. Manafangaro ny marina (tany Albania tokoa izy) sy ny diso (nande fiaramanidina izy fa tsy nandeha fiara nanerana an'i Serbia) mba hanalàna ny ahiahin'ny vahoaka.
Ny tranonkalan'ilay tambajotra serba fanamarinana ny vaovao, Raskrikavanje.rs, dia mbola nandiso ny lahatsoratry ny Politika indray tamin'ny nilazàny fa ny sidina tokana avy any Tirana ho any Budapest ny 13 Novambra dia alina be, ary ny Wizz Air, orinasa tsy dia mankaiza loatra io zotram-piaramanidina io. Raha nanambara tao amin'ny Facebook i Gruevski fa tao Budapest izy tamin'ny 1 ora tolakandro tamin'io andro io dia tsy ho vitany mihitsy izany ny naka ny sidina Wizz Air, na sidina hafa avy any Tirana.
Nalàna tsy nisy fanazavana tsy ho ao amin'ny tranonkalan'ny Politika ilay lahatsoratra. Na izany aza, ny vohikala Makedoniàna Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink dia nitazona ny dikasarin'ilay pejy ho ampahany amin'ny fanamarinana ho azy ireo. Ankoatra ny fandalinana ny vaovao tao anatin'ilay tantara, nanamarika ny CritThink fa tsy nanonona loharanom-baovao hanohanana ny hevitr'izy ireo akory ilay mpanoratra tsy fantatra anarana ao amin'ilay lahatsoratra mamitaka.
Koa satria tsy misy na torohay singany iray aza tao amin'ilay lahatsoratra, tsy misy na filazana tokana milaza ny loharano nipoiran'ilay vaovao na hoe avy amin'iza na iza ilay izy. Tsy milaza akory aza izy ireo fa misy mpanome vaovao tsy fantatra anarana – tsy ofisialy na ofisialy, izay manampy mampitombo ihany koa ny fisalasalana amin'ny fahamarinan'ny zavatra avoakan'izy ireo.
Tena nitsoaka nanafina endrika hot toy ny vehivavy tokoa ve i Gruevski?
Vaovao iray tsy marim-pototra nalaza ary naverimberina navoaka ihany koa ny fanambarana fa niampita ny sisintany taminà endrika vehivavy i Gruevski. Ity fanambarana ity dia nahatonga kisarisary marobe, mety ho valifaty noho ny fampiasàn'ny governemantany ho fitaovampiadiana ny fampijaliana vehivavy sy ny tsy fankasitrahana ny olona mitovy taovampananahana nefa mifankatia, ary ny fampiasàny ny fanoherana ny LGBTI mba hahazoany ny fanohanan'ny vahoaka.
Vita avy ao Hongria ? Andriamatoa Nikolas Nangalatra dia Nandositra.
Ny loharanon'ity filazana ity dia avy amin'ilay antsafa natao tamin'ilay MAkedoniàna profesora mpampianatra lalàna , Vlado Kambovski ny 14 novambra tao amin'ilay tranonkala malaza SDK.mk. Tamin'ny fotoana tsy mbola nahalalàna ny antsipirihan'ny tena zava-nitranga, nilaza i Kambovski fa azo eritreretina daholo ny zavatra rehetra, hatramin'ny zavatra manafintohina toy ny hoe nitsoaka ny fitsaràna taminà fitafinà vehivavy aza ilay politisiana mpitàna ny fombandrazana.
Nandika lalàna roa hafa ankoatran'ny fiampangana hanamelohana azy higadra roa taona an-tranomaizina ilay [nitonona tena] mahery fo lehibe sady tia tanindrazana Nikola Gruevski, izay nanao akanjom-behivavy ka nandositra an'i Makedonia. … Amin'ny fandosirany no vao mainka toa hanomezany porofo mivaingana fa meloka izy.
Haino aman-jery Hongroà maromaro no namoaka ara-bakiteny io fanamarihana io avy hatrany ary namoaka lahatsoratra tamin'ny lohateny mahatsikaiky hoe niampita ny sisintany niakanjo toy ny vehivavy i Gruevski , nitanisa ny SDK ho loharanon'ilay vaovao.
Vao mainka hanasarotana ny zava-misy, nisy ireo filazambaovao Makedoniàna sasany nampitombo ny filazambaovao diso avy amin'ireo loharanom-baovao ireo tamin'ny fampiasàna lohateny toy ny hoe “haino aman-jery Hongroà: niampita ny sisintany niakanjo toy ny vehivavy i Gruevski.” Niankina loatra tamin'ireo loharano ireo ny filazambaovao ka tsy nahatakatra hoe teraka avy ao anatin'ny fireneny ihany anie ilay tsaho.
Nanompana ny fotoanany tamin'ny fampielezankevitra sy ny fampahalalambaovao diso ny fitondran'i Gruevski, izay nitantana an'i Makedonia nanomboka ny taona 2006 ka hatramin'ny taona 2017. Ny ankamaroan'ny fotodrafitrasan'izy ireo, isan'izany ny sasany amin'ireo media mpiaradia aminy, izay mbola eo an-toerana sy manohy manodinkodina ny vaovao izay mazàna mihamitombo ny fipoapoakany sy ny tsy fahamarinan-toerany, kanefa mivezivezy miampita ireo sisintany ao amin'ny faritra.
Mety miasa mafy ireo mpanao gazety sy ireo tetikasa mpanamarina ny vaovao hanafoana azy ireny, saingy ny fitobahan'ireo vaovao diso sy ny fanoherana ao anatin'ny tontolon'ny haino aman-jery no toa manàla eny amin'ny vahoaka ny fitokisana ny asa fanaovan-gazety izay heveriny ho toy ny andrin'ny demaokrasia, ka vao mainka hanosika azy tsy hiraharaha ny politika.